PressReader - Isolezwe: 2017-11-14 - Aphikisayo afuna ubufakazi ngoZuma
Aphikisayo afuna ubufakazi ngoZuma
Isolezwe - 2017-11-14 - IZINDABA - ZIMASA MATIWANE
AMAQEMBU aphikisayo acele intatheli futhi engumbhali uMnuz Jacques Pauw ukuthi anikeze izinhlaka ezifanele ubufakazi bokuthi uMengameli Jacob Zuma wayehola uR1 million enkampanini kasomabhizinisi waseThekwini, uMnuz Roy Moodley.
Amaqembu aphikisayo ebephendula umholi weDA uMnuz Mmusi Maimane obevakashele ekomkhulu likahulumeni e-Union Buidlings eTshwane, izolo eyobheka ukuthi uZuma wayekuveza yini ukuthi uthola miphi imihlomula ngo2009.
“Namhlanje ngingakuqinisekisa ukuthi uMengameli Jacob Zuma akaze aveze ukuthi kunomholo ayewuthola enkampanini ezimele ngo2009 kuya ku-2010. Igama likaMnuz Roy Moodley livela uma umengameli ethi wayehlala emzini kaMoodley ongasolwandle eThekwini ngo-2016,” kusho uMaimane emuva kokubheka ibhuku eliveza imihlomulo kamengameli.
Encwadini kaPauw esihloko sithi The President’s Keepers, umbhali uveza ukuthi uMengameli Jacob Zuma wayehola u-R1 million njalo ngenyanga ngo-2009 owawuvela enkampanini iRoyal Security kaMoodley.
Ngokomgomo obhekelele ukuziphatha, umengameli kufanele asho uma kukhona imali ayithola eceleni. Kufanele asho noma ethola izipho okungaba amasheya, iminikelo nokunye.
“Awukho umholo ka-R1 million encwadini kamengameli. Kukhona oqamba amanga kodwa ngiyangabaza ukuthi nguMnuz Pauw,” kusho uMaimane. Uthe kudingeka uMvikeli woMphakathi aphenye ngalolu daba.
Ihhovisi likaMengameli likhiphe isitatemende esithi umengameli uyayiveza yonke imihlomulo ayitholayo futhi imibiko evela emaphepheni yimizamo yokumthunaza.
Umholi we-UDM uJenene Bantu Holomisa uthe:
“UZuma uphikile ukuthi wayeholelwa nguMoodley ngakho uPauw kufanele eze nobufakazi abunikeze izinhlaka ezifanele,” kusho uHolomisa.
UMnuz Narend Singh we-IFP uthe uPauw nabanye abanobufakazi obuthinta uZuma kufanele babunike izinhlaka ezifanele ngoba uma uZuma wakhohlisa iPhalamende uzoba necala.
Umholi weCope uMnuz Mosioua Lekota uthe bayayeseka imizamo ye-DA yokuthi kutholwe amarekhodi eRoyal Security azokhombisa ukuthi ngobani abaqashwe kuyo ngo-2009